Raharaha « Orlando Robimanana » : Aiza ny Smm ? -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha « Orlando Robimanana » : Aiza ny Smm ?
26/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nandrasan’ny rehetra ny fidirana an-tsehatry ny Smm ( Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara) mikasika ilay raharaha fanodinkodinam-bola 500 tapitriasa Ariary ( 400 828 000 Ariary) , izay mahavoarohirohy ny minisitry ny Vola teo aloha Jean Razafindravonona ( mpanao sonia voalohany ilay “autorisation” namoahana io volabe io) , ny talen’ny Tahirim-bolam-panjakana teo aloha Orlando Robimanana ( nanao sonia faharoa eo amin’ilay “autorisation” namoahana io volabe io), ary Claudine Razaimamonjy. Sarotiny amin’ny fanitsakitsahana ny hasin’ny fitsarana mantsy ny Smm, ary efa nampiseho fa hanara-maso akaiky ny raharaha tahaka itony, kanefa nahoana ry zareo no tsy re mihitsy tamin’ity raharaha ity?
Tsiahivina moa fa fanamboarana fotodrafitrasa iray an’ny minisiteran’ny Paositra eny Antanetibe Ivato no namoahana io volabe io tamin’ny 05 janoary 2015, ary efa nandeha eny anivon’ny Fitsarana manokana misahana ny kolikoly ny raharaha.
Taorian’ny fihainoana ireo olona voarohirohy amin’ity raharaha ity dia namoaka fanapahan-kevitra ny mpitsara nandray ity raharaha ity fa tazonina am-ponja vonjimaika ilay minisitra teo aloha voalaza anarana etsy ambony, voatazona am-ponja vonjimaika ihany koa ramatoa Claudine Razaimamonjy amin’ity raharaha ity, ary farany kosa dia nahazo fahafahana vonjimaika ilay nanao sonia faharoa eo amin’ilay « autorisation » namoahana io volabe io dia Robimanana Orlando izany.
Eo indrindra no ipetrahan’ny fanontaniana etsy ambony hoe « aiza ny Smm » amin’ity raharaha ity ? Tsaroan’ny rehetra fa nidiran’ny Smm amin’ny antsipirihiny mihitsy ny raharaha fanodinkodinam-bola tahaka ity izay nahavoasaringotra an-dRamatoa Claudine Razaimamonjy rehefa noraisin’ny Bianco an-tanana. Narahiny hatrany amin’ny hopitaly nitazonana an’i Claudine mihitsy, ary saika isan’andro dia manao fanambarana an-gazety ny Smm mikasika ny fivoaran’ny fitazonana an-dRamatoa Claudine Razaimamonjy.
Nisy fotoana aza notsaboina tany ivelany io ramatoa mpandraharaha io, ary nahavatra nanaraka akaiky ny fizotran’izany mihitsy ny Smm. Hatramin’ny toerana nitazonana azy farany any amin’ny fonjan’ny Vehivavy any Manjakandriana aza dia tsy nikely aina ireto Smm ireto nanara-dia sy nanara-maso izany.
Nahoana kosa anefa no tsy hita tabilao mihitsy ny Smm amin’ity raharaha mahavoasaringotra an’i Orlando Robimanana ity ? Ity raharaha ity anefa dia mitovy amin’ny tranga nahazo an’i Claudine Razaimamonjy izao ihany. Sady mbola voarohirohy amin’ity raharaha ity rahateo koa i Claudine. Andrasan’ny maro araka izany ny fidirana an-tsehatry ny Smm amin’ity raharaha ity.